Planetwa nke Mars: ihe niile ịchọrọ ịma banyere Network Meteorology
Mmadu enweela nlebara anya puru iche maka uwa na mbara igwe. Planetwa ahụ bụ Mars. A na-akpọ ya mbara ala uhie maka agba ya. Ọ bụ otu n'ime mbara ala ndị mbụ elere anya na teknụzụ ma site na etiti narị afọ nke XNUMX ọ malitere ịkọ nkọ banyere ịdị adị nke ndụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị kọwara ịdị adị nke ọwa mmiri ndị a na-eche iji bupu mmiri e chere na ọ bara uru maka mmepeanya.
Mars bu otu n’ime mbara ala ndi nyochara karia ihe omuma ndi ozo. You chọrọ ịmụ ihe niile gbasara mbara ala Mars? Na nke a, anyị ga-enyocha ya kpamkpam. Nọgidenụ na-agụ na ị ga-achọpụta ihe niile 🙂
1 Akụkụ Mars
2 Nhazi usoro ala
3 Ikuku nke Mars
Mars bụ nke mbara igwe anọ dị egwu nke mbara igwe. Ọdịdị ya na mbara ụwa anyị emetụtala ndụ Martian nke ukwuu. Mbara ala ahụ nwere usoro dị iche iche na-adịgide adịgide na okpu polar nke anaghị eme ezigbo ice. Ejiri oyi akwa mejupụtara ya nke nwere ike ịbụ akpụrụ oyi.
Ọ bụ otu n'ime obere mbara ala dị na mbara igwe anyị ma nwee Satellites abụọ: Phobos na Deimos. Enwere njem njem na Mars site na mbara igwe Marine 4. N'ime ya, a hụrụ ìhè na ntụpọ gbara ọchịchịrị, yabụ ndị sayensị chere na mmiri dị n'elu mmiri. Ugbu a, a na-eche na oke ide mmiri dị na mbara ala ihe dịka nde 3,5 gara aga. Naanị afọ ole na ole gara aga, na 2015, NASA gosipụtara ihe akaebe maka ịdị adị mmiri nnu.
Naanị ụwa mercury ọ pere mpe karịa Mars. N'ihi ọchịchọ nke ntụgharị, ọ na-enwe oge oge dịka ụwa na nke na-adịgasị iche n'ogologo n'ihi orbit elliptical. Achọpụtara Satellite abụọ ahụ na 1877 ma ha enweghị mgbanaka.
Ntughari ya gbara gburugburu Sun na-ewe ụbọchị 687 kwekọrọ na ụwa. Oge ntụgharị ya dịka 1.026 ụbọchị ụwa ma ọ bụ awa 24.623, obere oge karịa oge ntụgharị ụwa. Ya mere, ụbọchị Martian ji ihe dịka ọkara elekere karịa ụbọchị ụwa.
Nhazi usoro ala
Dayameta bụ nke 6792 km, otutu ya ka 6.4169 x 1023 n'arọ na njupụta nke 3.934 g / cm3. O nwere olu nke 1.63116 X 1011 km3. Ọ bụ okwute okike dị ka ụwa ndị ọzọ dị na mbara ala. Elu ala na-enye akara ngosi mmetụta metụtara ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe. Volcanism na mmegharị nke eriri ala ya bụ ihe ịtụnanya metụtara ikuku ya (dika oke ifufe uzuzu). Ihe niile a na-agbanwe ma gbanwee elu ala.
Aha otutu nke uwa uhie nwere nkowa di mfe. Ala nke Mars nwere nnukwu iron mineral nke na-ekpochapụ ma na-enye ụcha ọbara ọbara nke dị iche na ụwa. Ihe ndị dị nkọ na Mars emeela ka nchọpụta na ngụkọta oge nke oge mgbagharị dị mfe.
Tectonics ya nwere ọnọdụ kwụ ọtọ. Enwere akwa ice, ugwu mgbawa, na ndagwurugwu. Ọzọkwa, a chọtala ihe akaebe nke mbuze siri ike nke ọgba ndị jupụtara na uzuzu nke oké ifufe na-ebugharị. Ha gbanwere site na mmụba na mgbatị na-akpata mgbanwe siri ike na ọnọdụ okpomọkụ. Ọ bụ ebe ugwu Olympus, ugwu mgbawa kachasị na mbara ala dị na mbara igwe, yana Valles Marineris, otu n’ime ndagwurugwu ndị kasị ukwuu ma dị egwu nke mmadụ hụworo, nke ya na ogologo ya hà ka anya n’etiti New York na Los Angeles (United States).
Ikuku nke Mars
N'aka nke ọzọ, anyị ga-enyocha ikuku nke ọma. Anyị na-ahụ ikuku dị mma ma merie. Ọ bụ carbon dioxide, nitrogen, na argon. Maka izi ezi ka ukwuu, ikuku nwere nke 96% CO2, 2% argon, 2% nitrogen na 1% ihe ndị ọzọ. Dịka ị pụrụ ịhụ, enweghị oxygen na ikuku nke Mars, yabụ ndụ enweghị ike ịdị ka anyị si mara ya.
Ogologo nke Mars bu ihe dika okara nke uwa. Spacegbọelu mbu nke ozi ya nke ọma bụ nke akpọrọ Marine 4 (nke ekwuru na mbụ). Iji nye gị echiche nke oge ọ ga-ewe iji rute Mars na mbara ụwa anyị, Enwere ụzọ nke kilomita 229.
Nke a bụ nchịkọta ụfọdụ eziokwu mara mma gbasara ụwa a na nke anyị:
Ihe kacha nso Mars anyị nwere n’ụwa bụ Antarctica. Ọ bụ naanị ebe ịtụnanya ị nwere ike ịchọta mpaghara ọzara nwere oke ice.
Anyị maara na ma ụwa na-acha uhie uhie na nke anyị sitere na usoro nhụjuanya nke mbara igwe. Ekebere nnukwute asteroids site na ọtụtụ ijeri afọ gara aga. Iberibe iberibe akwụkwọ ndị a fọdụrụ site na Mars metụtara njedebe nke usoro mbara igwe ruo ọtụtụ nde afọ, na-eduzi ike ndọda nke mbara ala ndị ọzọ. Otu a ka ha siri bia n’ụwa a.
Enwere ike ndọda na mbara ụwa dị ka ụwa. Ihe data a choro, ma o doro anya, ebe obu na ibu ya pere aka. Ike ndọda dị pasent 62 karịa ka ọ dị na ụwa anyị. Onye dị otu narị n’arọ n’arọ ga-eru 100 n’arọ.
Mars nwere oge 4 dịka ụwa. Dịka ọ na-eme ebe a, oge opupu ihe ubi, ọkọchị, udu mmiri na udu mmiri bụ oge anọ nke ụwa uhie. Ihe dị iche n'ihe gbasara ihe anyị na-ahụbu bụ oge nke oge ọ bụla. Na Northern Hemisphere, oge opupu ihe ubi nke Martian na-ewe ọnwa asaa na oge okpomọkụ 7, mana ọdịda na udu mmiri na-adịgasị iche na obere oge.
Enweela mgbanwe ihu igwe na Mars dị nnọọ ka e nweela n’ụwa.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mbara ala a bụ otu n'ime ndị mmụta sayensị gụrụ akwụkwọ maka nkwenye na ọ nwere ike ịnabata ndụ ndị ọzọ na ụwa dị ka ọpụpụ ọpụpụ ịkwaga ma ọ bụrụ na ụwa anyị eruo oke. Gị onwe gị, ị chere na a ga-ahụ ndụ na mbara ala Mars?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Mars